“အတွေးစလေးတွေ”: အစိမ်းရင့်ရောင် အလွမ်း ( ၂ ) . . .
၀မ်းသာအားရနဲ့ ကြွားချင်စိတ်တွေ ငယ်ထိပ်တက်ပြီး အလောတကြီးတင်လိုက်မိပြီး သုံးရက်လောက်ကြာမှပဲ အခန်းဆက်မှန်းသိအောင် နံပါတ်စဉ်မထိုးခဲ့မိတာ ဦးဟန်ကြည် သတိထားမိပါရဲ့။ တစ်ရက်ကို တစ်ဖြတ်နှုန်းနဲ့ သုံးလေးရက်အတွင်း အပြီးတင်ဖို့ စိတ်ကူးထားမိပေမယ့် Google နဲ့ ပြဿနာတက်ပြီး account အပိတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲတင်ဖို့ လေးငါးရက်လောက် အချိန်လင့်သွားတာ တောင်းပန်ရဦးတော့မှာပါပဲ။ ( တောင်းပန်လိုိ့ကို မဆုံးနိုင်းဝ)
နောက်တစ်ပိုင်းကို မတင်ခင်မှာ ဒီဝထ္ထုဟာ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ကြောင်း အိမ်ရှင်မ မဒမ်ဟန်ကြည်ဆီမှာ သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာနဲ့ ထောက်ခံချက်တောင်းပြီး ပို့စ်တင်ခွင့်ကို တရားဝင်ပါမစ်ရပြီးဖြစ်တာမို့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ဗိုက်ခေါက်ထူထူလေး လွတ်လပ်ရေးရနေပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသဗျား။ ( အနှီလိုမှ ကြိုကြိုတင်တင် မပြောရင် လူပျိုသိုး သူကြီးမင်း ကိုကိုမောင်နဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်ချောတို့ရန် ကြောက်ရသေးသကိုး )
နောက်နေ့များတွင် မီသည် သူ၏ တပည့်မကလေး ဖြစ်လာသည်။ သူသည်လည်း မီ၏ ဆရာအဖြစ် ရောက်ခဲ့တော့သည်။ မီ့ကို စာပြပေးရင်းမှ သူမ၏ စိတ်နေသဘောထားကို သူသိလာရ သည်။ ဆံပင် ပျော့ပျော့ရှည်ရှည်လေးများနှင့် ဂါဝန်ဖားဖားလေး ၀တ်ထားသော ကလေးမလေးသည် အလွန်ပင် ဇွဲကောင်းလှသူလေး ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် လူကြီး ဆန်သော်လည်း အရွယ်အရ သူမ၏ အပြုအမူများမှာ ပီဘိကလေးမငယ်လေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဒေါ်၏ အလိုလိုက်မှုကြောင့် မထင်ရင် မထင်သလို စိတ်ကောက်တတ်သော်လည်း စိတ်ပြေလွယ် သည်။
ကလေးဘ၀မှစ၍ မိဘနှင့် မနေခဲ့ရသဖြင့် သူ့အပေါ် တွယ်တာနေကြောင်းလည်း သူသတိထားမိသည်။
အချိန်ကာလသည် ရစ်ဖွဲ့တတ်သော သံယောဇဉ်ကြိုးကို ခိုင်မာစေသည်။ လေးလမျှသော အချိန်သည် သူနှင့်မီကြားရှိ သံယောဇဉ်ကို ကောင်းစွာနှောင်တွယ်မိစေရန် လုံလောက်ခဲ့သည်။ ကာလများစွာ ခြောက်သွေ့ခဲ့သော သူ့ဘ၀သည်လည်း တဖြည်းဖြည်း စိုပြည်လာကြောင်း သတိထားမိသည်။
မကြာမီ နှစ်ဝက်အစမ်းစာမေးပွဲဖြေရတော့မည်ဖြစ်၍ ကလေးမမှာ အသည်းအသန် စာကြည့်နေရရှာသည်။ ထင်းရှူးပင်အောက်သို့ သူ့ထက်ပင် စောရောက်ပြီး စာကျက်နေတတ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လှသော သူမကို သူပင်အံ့သြယူရသည်။ ကလေးမ၏ စာမေးပွဲအတွက် သူကိုယ်တိုင်လည်း မအားမလပ်နိုင်အောင်ရှိသည်။ မေးခွန်းဟောင်းများ ရှာဖွေရခြင်း၊ မေးနိုင်သော မေးခွန်း ပုံစံများကို မှတ်စုထုတ်ရခြင်းတို့ကြောင့် သူမထက်ပင် အလုပ်များရသည်။ မီနှင့် ပတ်သက်လျှင် တက်ကြွလွန်းနေတတ်သော သူ့အဖြစ်ကို ရယ်ချင်နေမိရပြန်သည်။
ယနေ့ မီတို့ ပထမဆုံးဘာသာဖြေသည်။ ဖြစ်ချင်စိတ် ပြင်းထန်လွန်းသော သူမအတွက် သူစိတ်ပူ၍မဆုံး။ “ စိတ်အေးအေးထားပြီးဖြေနော် ” ဟု အထပ်ထပ် မှာပြီးဖြစ်သော်လည်း စိတ်မ အေးနိုင်သည်မှာ သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
မနက်လင်းကတည်းက သူယောင်ချာချာဖြစ်နေသည်။ အိပ်ယာထပြီး သွားတိုက်၊ ပလုပ်ကျင်းရုံကျင်းပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်သည်။ အပြင်ရောက်မှ မျက်နှာမသစ်ရသေးကြောင်း သတိရပြီး ရေချိုးခန်းတွင်းသို့ ပြန်ဝင်ရသည်။
မနက်စာ ကော်ဖီဖျော်ရာတွင် ကော်ဖီမှုန့်ကို ဇွန်းအပြည့်ထည့်ပြီး နို့ဆီမထည့်မိ။ ထမင်းစားပွဲတွင်ထိုင်ပြီး ကော်ဖီသောက်မှ ပေါ့ရွှတ်၊ ခါးသက်သော အရသာကို သတိထားမိသည်။ ကော်ဖီကို ရှက်ရှက်နှင့် ကျိတ်မှိတ်မြိုချသောအခါ ရင်ထဲတွင် ချိုမြနေသယောင် ခံစားရသည်။
လုပ်သမျှကိုင်သမျှ မှားယွင်းနေမည့် သူ့အဖြစ်ကို သတိထားမိပြီး ခြံထဲဆင်းထိုင်သည်။ လူက ငြိမ်သွားမှ စိတ်က ပို၍မငြိမ်မသက် ဖြစ်ပြန်သည်။ စာဖြေခန်းထဲရှိ ကလေးမ၏ ပုံရိပ်ကို နာရီ တကြည့်ကြည့်နှင့် မှန်းဆနေမိသည်။ ဖြေနိုင်ပါစေဟူသော ဆန္ဒဖြင့် ရင်သည် လှိုက်ခုန်၏။ စိတ်ပင်ပန်းစွာဖြင့် ပန်းပင်များကို ရေလောင်းသည်။ စိတ်နှင့်လူက မကပ်။ သတိထားမိချိန်တွင် ပန်းပင် သည် ရေအရှိန်ဖြင့် အဖြစ်ဖွေးဖွေးပင် ပေါ်နေချေပြီ။
သူ စိတ်ညစ်ညူးစွာဖြင့် ရေပိုက်ကို ပစ်ချပြီး အ၀တ်လဲကာ ထင်းရှူးပင်ရှိရာ လွင်ပြင်ဆီသို့ အမြန်လျှောက်သွားသည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်သောအခါ ကလေးမစာမေးပွဲအချိန်စေ့ရန် နာရီဝက် သာသာ ကျန်နေသေးသည်။ ထိုင်လိုက်၊ ထလိုက်၊ လမ်းလျှောက်လိုက်ဖြင့် တစ်နာရီကျော်ကျော် မျှော်လိုက်ရသည်။
အဝေးမှ တရွေ့ရွေ့လာနေသော သူမကိုမြင်ရလျှင် သူထိုင်နေရာမှ ထ၍ရပ်သည်။ သူမဆီ လျှောက်သွားသည်။ လူချင်းသဲကွဲစွာ မြင်မြင်ချင်း “ ဖြေနိုင်လား ကလေး ” ဟု သူမေးသည်။ “ အိုကေတာပေါ့ ဦးရဲ့ ” ဟု သူမ ဖြေသည်။ ထင်းရှူးပင်ဆီသို့ လျှောက်လာကြရင်း သူမထံမှ မေးခွန်းကို သူယူကြည့်သည်။ ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော သူ့ကို သူမ ကြည့်သည်။
“ ဦးက မီ့ကိုသာ ပြောနေတယ်။ ဦးကဖြင့် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးတော့ . . . ”
“ ကလေးအတွက် စိုးရိမ်လို့ပါ ” ဟု သူဖြေရင်း ထင်းရှူးပင်အောက်တွင် ထိုင်သည်။ “ မနက်ဖြန် ဖြေရမယ့်ဘာသာ ကြည့်ရအောင် ” သူမထံမှ စာအုပ်များကို သူလှမ်းယူရင်း ပြောသည်။
ဆောင်းအ၀င်လေအေးက သူတို့နှစ်ဦးကို ညင်သာစွာ တိုက်ခတ်ကြည်စယ်သွားလေသည်။
“ ဦး . . . မီ လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးပါတယ် . . . ”
သူ့ထံသို့ အပြေးလာရင်း မီပြောသည်။ ပျော်ရွှင်မှုသည် သူမမျက်နှာပေါ်တွင် အတိုင်းသား ပေါ်၏။ သူမထက် မလျော့သော ပီတိဖြင့် သူထရပ်သည်။ ချီးကျူးရန် စကားလုံးသည် အလွယ်နှင့် ပင် ရှာမရ။
“ ဦး . . . မီ့ကို ဆုချရမယ်နော် ” ဟူသော သူမ၏ တောင်းဆိုသံမဆုံးခင် “ ကလေးကို ဆုချရမယ် ” ဟု သူပြေသည်။ စကားချင်း ထပ်လုနီးပါး ဖြစ်သွားသောကြောင်း သူမရယ်လေသည်။ တစ်ပတ်ကျော် ပင်ပန်းထားသဖြင့် ကလေးမ အနည်းငယ် ဖျော့တော့နေရှာသည်။ အိပ်ရေးပျက်ထားသော မျက်လုံးများထဲတွင်မူ ရိုးသား၍ အပြစ်ကင်းစင်သော အလှကို မြင်နေရ၏။
“ ဦး Final မှာ ဒီလိုပဲ ဖြေနိုင်ရင် မီ ဆေးကျောင်းတက်လို့ ရပြီပေါ့နော် . . . ”
သူမ၏ မေးခွန်းအဆုံးတွင် သူ၏ ဆရာဝန်အဖြစ်ကို သတိရသည်။ သိက္ခာမလုံစွာပြုံးရင်း သူခေါင်းညိတ်မိသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို တွေးတောဟန်ဖြင့် သူမ ငြိမ်သက်သွားပြန်သည်။
နှင်းစက်အချို့ ထင်းရှူးပင်ထက်မှ ကြွေကျလာကြလေ၏။
နောက်တစ်ရက်တွင် လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ထုပ်ဖြင့် ထင်းရှူးပင်အောက်မှ သူမကို သူစောင့်သည်။ မကြာခင် သူမ အပြေးရောက်လာသည်။ သူ့လက်တွင်းမှ လက်ဆောင်ဗူးကို မြင်လျှင် “ ဦးက ကတိတည်သားပဲ ” ဟု ပြောလေသည်။
“ ဦးရဲ့ လက်ဆောင်ကို ကလေး မရယ်ရဘူးနော် ”
ပြောရင်း လက်ဆောင်ကို သူမလက်ထဲ ထည့်သည်။ သူမက “ ဟုတ်ကဲ့ပါ ” ဟု ဆိုရင်း လက်ဆောင်ဗူးကို ပတ်ထားသော ဖဲကြိုးကို ဖြည်သည်။ လက်ဆောင်ကို မြင်ရလျှင် သူမ မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်ကို သိလိုဇောဖြင့် သူမမျက်နှာကို သူဖတ်နေမိသည်။
ပက်ကင်စက္ကူကိုခွာပြီး ဗူးကို သူမ ဖွင့်သည်။ စနစ်တကျခွေထည့်ထားသော နားကြပ်ကို မြင်လျှင် သူမမျက်နှာ တည်သွားသည်။ နားကြပ်ကို ထုတ်ယူရင်း သူ့ကို တစ်ချက်ကြည့်သည်။
“ ဦးရဲ့လက်ဆောင်ကို ကြိုက်ရဲ့လား ” ဟု သူမေးမိသည်။
“ ကျေးဇူးပဲ ဦး ” ဟုဆိုရင်း နားကြပ်ကို လည်ပင်းတွင် သိုင်းသည်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းသူ၏ မျက်နှာကို သူကြည့်ရင်း “ ဒီလိုဆိုတော့ ကလေးက ဆရာဝန်နဲ့ တူသားပဲ ” ဟု စိတ်ကို ဖော့ပေးသည်။
“ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့မတူတဲပ ဆရာဝန်ရှိသေးတယ် ” ဟု သူမ ဆိုသည်။ လုံးဝမထင်မှတ်သောစကား . . . ။ သူ့ရင်ထဲတွင် နင့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ အကြည့်ကို သူမထံမှ အဝေးရှိ တောတန်းဆီသို့ သူလွှဲယူလိုက်သည်။ ညှိုးသွားသော သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ရင်း
“ ဦး မီ့ကို စိတ်ဆိုးသွားသလားဟင် . . . ”
သူမ စိုးရိမ်တကြီး မေးသည်။ သူညင်သာစွာ ခေါင်းရမ်းသည်။
“ တစ်နေ့မှာ လူနာတိုင်း အားကိုးရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မီကြိုးစားပါ့မယ်လို့ ဦးကို ကတိပေးပါတယ် . . . ”
ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ပြန်သားသော လေသံ။
သူ သက်ပြင်းတစ်ချက် ခိုးရှိုက်ရင်း သူမဆီသို့ မျက်နှာမူသည်။
“ ကလေး အောင်မြင်မှာပါ ” ဟု သူခိုင်မာစွာ အားပေးသည်။။ သူနားထဲတွင်မူ “ လူနာတိုင်း အားကိုးရတဲ့ ဆရာဝန် ” ဟူသော ကလေးမ၏ စကားလုံးများသည် ပဲ့တင်ထပ်လျှက် . . .
ဆောင်းသည် အအေးဓာတ်အချို့ကို သယ်လာသည်။
အပိုင်း ( ၃) ကိုလည်း အားပေးကြပါဦး . . .
Posted by Han Kyi at 2:41:00 am
ဇာတ်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်တက်လာပြီ
ဆရာရယ် ဖြစ်ပျက်နေလိုက်တာ။ မီ စာမေးပွဲဖြေနေတာကို ကလေးမွေးဖွားမဲ့ မိန်းမကို ဆေးရုံမှာ အခန်းအပြင်က စောင့်နေရတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက် ပုံစံမျိုးပေါက်နေပါရောလား။ ခြေမ ကိုင်မိ လက်မ ကိုင်မိတွေ ဖြစ်နေတာများ မြင်ယောင်ရင်း ပြုံးနေမိတယ်။
ဟုတ်လောက်တယ်။ မီအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရလောက်တယ်။ သွားတိုက် ကော်ဖီဖျော် အပင်ရေလောင်း။ အားလုံးအလွဲလွဲတွေချည်းဘဲ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ဒီစာရေးရင်းနဲ့တောင် အဲဒီဆရာဝန်က စိတ်လှုပ်ရှားနေသေးပုံဘဲ။ တိုက်ပင်တွေ ခါတိုင်းထက် ပိုလွဲနေတဲ့အထိတောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေရှာတယ်။း)
ဘယ်လိုပြောပြော ဒါကိုယ်တွေ့ဘဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဟား ဟား ဟား။
ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေးပြောပြလို့
ကျွန်မ ဝတ္တုကိုရော၊ အပေါ်က ကိုမောင်မောင် ( ပန်းရနံ့ )ရဲ့ ကော်မန့်ကိုပါ သဘောကျ နှစ်သက်မိတယ်။ အပိုင်း ၃ ကို မျှော်နေပါတယ်ရှင်။
အပိုင်းတစ်ရော နှစ်ရော ပေါင်းဖတ်သွားလိုက်တယ်....နည်းနည်းလေးများတောင်ဆိုလို့ရရင် မနက်ဖြန်အကုန်တင်ပေးပါလား ဆရာ ဆန်းဒေး ဆိုတော့ အလုပ်နားတယ်လေ။
၀တ္တုက ဒီလောက် အသက်ဝင်နေမှတော့ ဆရာဟန်... မှန်မှန်ပြောနော်.. သဂျီးမင်းပြောသလိုများလား.. :) ကျောင်းဆရာ ၀ါသနာပါပုံကတော့ ၀တ္တုထဲအထိတောင်ပါတယ်.. ဇာတ်ရှိန်တက်နေလို့ မြန်မြန်လေး တင်ပေးပါဂျာ...
တိုက်ပင်လွဲတာက အိပ်ငိုက်ရင်းနဲ့ စာရိုက်လို့ပါသူကြီးနဲ့ ကိုအောင်ထွဋ်ရယ်...အမှုမကြီးကြီးအောင် လုပ်ကြပြန်ပါပြီ...း)
ဘယ်လိုပြောပြော တို့ကတော့ ယုံဘူးဘဲ
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆိုတာ ဘုရားစူးပြောစရာမလိုအောင် ယုံပြီးသား ခိခိ :P
14 April 2012 at 03:06
ကွန့် မန့် တွေ ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတယ ဆရာဟန်ရေ..ဘာဖြစ်လို့ဆရာဝန် မလုပ်လဲ သိချင်သွားတယ်